जापानको कावासाकीमा विद्यालय जान लागेका बालबालिकामाथि चक्कु हमलाः २ को मृत्यु, १६ घाइते !::Leading Nepal News
जापानको कावासाकीमा विद्यालय जान लागेका बालबालिकामाथि चक्कु हमलाः २ को मृत्यु, १६ घाइते !
जेठ १४, जापान । जापानको कावासाकी शहरमा मंगलबार बिहान स्कुल जानको लागि बसको प्रतिक्षा गरिरहेका स्कुले बालबालिकाको समूहलाई एक व्यक्तिले अन्धाधुन्द चक्कु हमला गरेका छन् । उक्त घटनामा २ जनाको मृत्यु भएको र कम्तिमा १६ जना घाइते भएको बीबीससीले जनाएको छ । मृतक एक जना स्कुले बालिका रहेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ ।
कावासाकी फायर डिपार्टमेन्टका प्रवक्ताले दिएको जानकारी अनुसार मंगलबार बिहान स्थानीय समयअनुसार ७ः४४ मा इमर्जेन्सी फोन आएको थियो । फोनमा एक युवकले मानिसहरुमाथि चक्कु हमला गरेको जानकारी प्राप्त भएको उनले बताए ।स्रोतका अनुसार पुलिसले घटनास्थलबाट दुई चक्कु पनि बरामद गरेको छ । अधिकारीका अनुसार उक्त घटना प्राथमिक विद्यालय नजिकै एक बस स्टपसँगै भएको पार्कमा भएको हो । मृत्यु हुने बालिका पार्कमा खेलिरहेकी थिइन् ।
घटना एउटै व्यक्तिले गरेको जापानी मिडियाले बताएको छ ।आक्रमणकारी अन्दाजी ४० देखि ५० वर्षबीचको पुरुष भएको बताइएको छ । आक्रमणपछि आरोपी आफैले आफैलाई घाँटीमा चक्कु प्रहार गरेर आत्महत्या गरेका छन् ।प्रहरीले हालसम्म आक्रमणको कारण पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
जापान विश्वमै सबैभन्दा कम हिंसात्मक अपराध हुने देश हो । त्यहाँ सार्वजनिक स्थानमा हुने हिंसाको घटना झनै कम छन् । तर सार्वजनिक स्थानमा हुने हिंसामा धेरै जसो चक्कुको प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ ।